မကြုံရ တာကြာပြီ မို့ – Hlataw.com
ဒေါ်ပိုးပန်းချီလို့ခေါ်တဲ့ကျမအရွယ်တော်တ ဆိတ်ဟိုင်းလို့လေးဆယ်ကျော်ထဲဝင်ခဲ့ပြီ။မု ဆိုးမတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ရှိပေမယ့်အနေအစားကတော့အထက်တန်းလွှာထဲမှာပဲရှိပါတယ် ။ယောက်ကျားရှာခဲ့တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအများကြီးကျန်ခဲ့ပေမယ့်တတ်သည့်ပ ညာမနေသာဆိုသလိုစိန်ကောင်းကျောက်ကောင်းကိုင်တဲ့ပညာတတ်တာမို့ စိန်ပွဲစားဆိုတဲ့နာမဂုဏ်လေးရထားပါသေးတယ်။ ဒီတော့လဲအပေါင်းအသင်းတော့ဆန့်ပြီးသားလေ။ သားသမီးရယ်လို့မရခဲ့တော့လဲတစ်ယောက်တည်းပေါ့။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အသက်လေးဆယ်ကျော်လာရင်နည်းနည်းဝလာတာကလွဲရင် ကျန်တာတွေကတော့လတ်ဆတ်သေးတာပေါ့လေ။အားတဲ့အချိန် ဂျင် ဆော့ကစားထားတဲ့အ တွက်ယိုယွင်းမှု့သိပ်မရှိသေးတာလည်းပါ တယ်။
အပျင်းပြေလုပ်နေတဲ့ပွဲစားဘဝမှာကြုံလာသူမောင်လေးကြောင့်မမပိုးပန်းချီရဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာခဲ့ရတယ်။ သူ့နာမည်ကကျော်ကျော်။ ရုပ်ရည်သနားကမားလေးနှင့်မို့အချစ်တွေပိုခဲ့ရတယ်လေ။ အခုလဲကြည့်လေအနားမှာလာ ပြီးကပ်ချွဲနေပြီ။တဏှာလို့မမြင်တဲ့အချစ်လေ “ချစ်မ” “ဘာလဲကျော်ကျော်” “ချစ်တယ်ဗျာ” “လုပ်ပြီ” “ဒီမှာကျော်ကျော်မမကမောင်လေးထက်အ သက်အများရီးကြီးတယ်” “အဲဒါဘာဖြစ်လဲဗျာ” “ဘာဖြစ်ရမှာလဲမောင်လေးနှင့်မမတွဲနေတာလူတွေမြင်ရင်မမကိုပြောကြမှာပေါ့” “ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောလေမမ၊တကယ်တမ်းကပေါင်းမယ့်သူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာလေ” “မောင်လေးကလေးကွာ”တကယ်တမ်းမှာကျမလည်းကျော်ကျော်နှင့်အတူတူနေချင်ပါတယ် ။လောလောဆယ်တော့စိတ်ထဲမဝံ့မရဲဖြစ်နေသေးတာပါ။တစ်ယောက်တည်းနေရတာလည်းပျင်းတယ်။ အသက်ကြီးလာရင်ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းမွန်စွာစောက်ရှောက်ပေးမယ့်သူလဲလိုတာပဲလေ။ တစ်ယောက်တည်းဘဝကအထီးကျန်ဆန်ပါတယ်။ ကျမဘဝမှာလင်သားမရှိတော့ကာမစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်လက်နဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ရတာပဲ။ အခုလိုအနားမှာရစ်သီရစ်သီနှင့်ကျော်ကျော်တစ်ယောက်ပွတ်သပ်ပေး နေတော့ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ချစ်စိတ်တွေပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်။တဏှာတွေကြွမိတယ်။
“မမကိုအရမ်းချစ်တယ်ဗျာ””အွန့်အွတ်”အတင်းပွေ့ဖက်ရင်းနှုတ်ခမ်းကို အတင်းနမ်းလာတော့အသက်သာလေးဆယ်ကျော်မယ်။ ရင်ခုန်သံတွေလတ်ဆတ်တုန်းဆိုတဲ့အတိုင်း ရင်တွေတလှပ်လှပ်တုန်ပြီးမောဟိုက်သလိုခံ စားရတယ်။ “အို့..ကျော်ကျော် မကဲနဲ့ကွာ” “ချစ်လို့ပါမမရာ” နယ်ကျော်လာတဲ့ကျော်ကျော်လက်ကြောင့် ကျမစိတ်တွေမခိုင်ပဲယိုင်နဲ့ကုန်ပြီ။ အရည်မရွှန်းတော့ပေမယ့်သဘဝတရားကပေးတဲ့တဏှာစိတ်ထရင်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝအတိုင်း ကျမရဲ့ပစ္စည်းကစိုလို့လာတယ်။
လည်တိုင်ကိုနမ်းရင်းတကိုယ်လုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပွေ့ဖက်ထားပြီးနှစ်ကိုယ်ကြားမှာလေတောင်ဝင်မရတဲ့ အခြေအနေအဆိုးဆုံးကတော့ကျော်ကျော့် ဟာလေးကကျမရဲ့ပေါင်ကြားအဖုတ်နေရာကိုလာပြီးပွတ်နေသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် ထိန်းထိန်းထားတဲ့စိတ်တွေတမံကျိုးပေါက်သလိုဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ “အော် ကျော်ကျော်ရယ်” ပွေ့ဖက်ရင်းကျမတင်သားကြီးတွေကိုကိုင်ပြီးညစ်နေတော့လည်းစိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းရပါ့။ ကြုံဖူးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်သတိရ လာပြီးစိတ်တွေဆူဝေနေတယ်။အခုလည်း ကျော်ကျော်ရဲ့လက်တွေကကျမပေါင်ကြီးကိုမပြီးသူ့ရဲ့လီးကိုအဖုတ်နဲ့မထိထိအောင်လုပ် ပေးနေတယ်။
အိမ်ရှေ့ကြီးမှာဆိုတော့လည်း မလုံမလဲပေါ့ရှင်။ “မမကိုအရမ်းချစ်ချင်နေပြီ” “အာ မောင်လေးရယ်” “မမအိမ်ရှေ့ကြီးမှာမကောင်းဘူးမမရယ်။မမအခန်းသွားရအောင်လေ” “ဟာလူဆိုးလေး၊မသင့်တော်ဘူးကွာ” ကျမပြောပေမယ့်ကျမခြေလှမ်းကကျမအိပ် ခန်းဆီခြေဦးလှည့်နေပြီ ကျော်ကျော်တစ်ယောက်တော့မမကြီးငါ့ကို ခိုက်သွားပြီလို့တွေးရင်ကျေနပ်ခဲ့တယ်။ကျော်ကျော့်ဘဝကသာမန်လူတန်းစားအလုပ်အ ကိုင်ရယ်မရှိကျောက်ပွဲစားသူငယ်ချင်းဆီကိုသွားရင်းအကူအညီတောင်းရာကနေဒီမမကြီးကိုတွေ့ခဲ့တာ။ မရှိဆိုတဲ့စကားမကြားရတဲ့လူတန်းစားကြားကိုရောက်ဖူးနေတဲ့ကျော်ကျော်မမအညှာကိုကိုင်လိုက်နိုင်တယ်။ လူငယ်ဘဲဗျာ။သူများတွေသုံးရင်သုံးချင်တယ်။ လှတာလေးဝတ်ချင်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနှင့်တွဲလုပ်ရင်းမူးယစ်ဆေးဝါး )လေးပါချတတ်လာတယ်။လူကသာအ လုပ်မရှိကျော့ကျော့မော့မော့နေတတ်တယ်။
အိမ်ကမိဘတွေကကျော်ကျော်ကိုကြည့်မရ။အလုပ်ကလေးတည်တည်တံ့မရှိဘဲ ပွဲစားယောင်ယောင်လုပ်နေတော့အမြဲမည်တွန်တောက်တီးတတ်တယ်။ အခုလိုမမကြီးနှင့်တွေ့တော့ကျော်ကျော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝရောက်ပြီဆိုပြီး ရည်းစားလည်းမရှိတော့မမရင်ခွင်ကိုဒိုင်ဗင်ပစ်ပြီးဝင် ပစ်လိုက်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဘဝလွတ်ဖို့ဆိုတာအထောက်အပံ့လိုတယ်လေ။ဘုရားရှင် တောင်မှပါရမီဖြည့်ဘက်လိုသေးတာပဲလေ။အခုလည်းမမကြီးကိုအပိုင်ချည်ဖို့မမအိမ်ကိုသွားရင်းမောင်လေး အထာကိုပိုင်နိုင်စွာအသုံးချလိုက်နိုင်တယ်။အခုဆိုမမရဲ့အိပ်ခန်းထဲ ထိရောက်ခဲ့ပြီလေ။လူဆိုတာတဏှာနှင့်မကင်းဘူး။စားလို့ကောင်းမှန်းသိရင်စားချင်တတ်တဲ့သဘာဝ။ မိန်းမသားဆိုတော့ဝယ်စားမရတဲ့အခြေအနေကိုကြိုသိတော့ မမစိတ်ပါအောင်နှိုးဆွပြီးလိုရာကိုကြိုးဆွဲထိန်းနိုင်ဖို့ကျော်ကျော် ကြိုးစားခဲ့ပြီ။မမစိတ်ကိုဆွပေးဖို့ ရာမမနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်ပြီးမမရဲ့အကျီင်္ကိုအပေါ်မတင်ကာဘရာကိုပါတွန်းတင်လိုက် တယ်။ပြီးမှခလေးတစ်ယောက်လိုမမရဲ့နို့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်ပါတော့တယ်။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့အင်းးဟင်းးဟင်းးးး” မမရဲ့ညည်းသံလေးတွေထွက်လာသလိုကျော်ကျော်ရဲ့ငပဲကလည်းမာလာခဲ့တယ်။ နို့စို့ရင်းလုံချည်ပေါ်ကနေမမအဖုတ်ကိုကိုင်လိုက် တယ်။ မမလည်းပေါင်ကြားကိုဟပေးလာတာကြောင့် လုံချည်အောက်စကိုအပေါ်လှန်ပြီးအဖုတ်ကိုထိထိမိမိကိုင်လိုက်တယ်။ သန့်ရှင်းစွာနေတတ်တဲ့မမအဖုတ်ကအမွေးမရှိဘူး။ရိတ်သင်ထားတာဖြစ်မယ်။ စိတ်ပါနေလို့လားမသိဘူးမမအဖုတ်ကဖောင်းကားနေပြီ။ချောဆီလေးတွေတောင်အနားစပ်တွေမှာစိုနေပြီ ။ကျော်ကျော်လည်းမမရဲ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းထဲလက်ခလယ်ထည့်ပြီးမွှေလိုက်တယ်။ “အာ့ ဟာ့ ဟာ့ အာ့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကျော်ရယ်” အစေ့ကလေးကိုခုလုတ်တိုက်သွားတာကြောင့် ကျမမှာညည်းမိပြီးကျော့်ကိုပြောခိုက်မိတယ်။ မကြုံတာကြာပီမို့လားမသိပါဘူး။ ကျမစိတ်လည်းအရမ်းကိုထန်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။
ကျော်ကျော်လည်းပြန်ဖြေမနေအားပါဘူး။တဆက်တည်းမမအဖုတ်ကိုမျက်နှာအပ်ကာ အကွဲကြောင်းကိုလျှာအပြားလိုက်လုပ်ပြီးယက်လိုက်တယ်။ပြီးမှမမပေါင်ကိုကားကာမြှောက် ပြီးအဖုတ်ပိုပြီးယက်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့တယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မမလည်း ကျနော့အကြိုက်သိတယ်ခြေကားပြီး ပေါင်မြှောက်ထားတော့မမရဲ့အဖုတ်အကွဲ ကပြဲအာလာတယ်။အကွဲကြောင်းထဲလျှာကိုစုချွန်ပြီးမွှေထည့်လိုက်တော့တယ်။
“ပလပ်ပလပ်” “အာ့..အားး…လားး” ညည်းတွားသံမိုးသို့မညံပေမယ့်အိပ်ခန်းတွင်းမှာတော့လွှင့်ပျံနေတယ်။ကျနော့်ယက်ချက်ကလည်းပြင်းတယ် ။အစေ့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်တော့မမလူးလှိမ့်နေတယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” “အိုးမောင် အားးးမောင်” မမအသံတွေအဆက်မပြတ်ညည်းလာတယ် “မမ မောင်လိုးချင်ပြီ” “မောင့်သဘောပါမောင် “မမကိုလီးမစုပ်ခိုင်းသေးဘူး၊သူလီးစုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတဖွားဖွားပေါ်လာစေရမယ်။ အခုတော့ပထမဆုံးမမကိုအပိုင်ကိုင်နိုင်ဖို့အရေးကြီး တယ်လေ။ ဒီတော့မမစောက်ဖုတ်ထဲလီးရည်ဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ် ။ကျော်ကျော်ဘောင်းဘီနှင့်အတွင်းခံချွတ်လိုက်တော့ “အယ် မောင်ရယ်ကြီးလှချည်လားကွာ” ကျနော့လီးကိုကြည့်ပြီးမမကပြောတယ်။ကြီး တာတော့လုံးပတ်တစ်လက္မခွဲလောက်ရှိပြီးအရှည်ကခုနှစ်လက်မနီးပါးရှိတယ်လေ။ မမအဖုတ်ကိုလီးနှင့်တေ့ပြီးဖိချလိုက်တယ်။
“ဇွိ ဗျိ ဗြစ် ဗြစ် ” “အာ့ မောင် အိုး.. အာ့ အင်းဟင်းး..ဟင်း” လီးကစောက်ဖုတ်ထဲတဇွိ ဇွိ ဝင်နေတာ။အလိုးမခံရတာကြာလို့လားမသိဘူးနည်းနည်းတော့စေးပိုင်နေတာပဲဗျာ။ မောင့်လီးဝင်လာတော့အရမ်းကိုဖီးတက်လာ တယ်။အလိုးမခံရတာကြာပြီမို့လားမသိအရမ်းကိုကောင်းလွန်းတယ် ။မောင့်လီးကြီးရဲ့ထိပ်ဖူးကြီးဝင်လေမျက်လုံးလေးကိုမှေးစင်းပြီးညည်းမိတယ်။သူလီးဒစ်ကြီးက အဖုတ်အတွင်းသားတွေကိုပွတ်တိုက်သွားလေ ဇိမ်အရမ်းရှိလေ။လီးကြီးကြီးရှည်ရှည်ကစွဲမက်လောက်တယ်။
ကျနော်လည်းမမနို့ကိုတလှည့်စီကုန်းစို့ရင်း တချက်ချင်းလိုးလိုက်တယ် “ဗျစ် ဖွတ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်ဘွတ်””အိုးရှီးးရှီးးးရှီးးးအိုးးးကောင်းလိုက်တာ”ကောင်းလွန်းလို့ယောင်ပြီးအသံထွက်သွားတော့ “မ မောင်လိုးတာကောင်းလား” “အင်းကောင်းတယ်မောင်” မမကောင်းနေပြီလေ အရှက်နည်းလာပြီတချက်ချက်ကျနော့ကျောကိုကုတ်ဖက်ပြီးဆောင့်ခိုင်းနေတယ်။
ကျနော်လည်းမြန်မြန်လေးလိုးလိုက်တယ် “ဘွတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်းးးဘွတ် ဖွတ် ဘွတ် ” “အာ့ရှီးးးကောင်းတယ် အိုးရှီးးရှီးးးး” မမပြီးတော့မယ်မှန်းသိပြီးမမမြန်မြန်မြန်ပြီးအောင်လိုးလိုက်တယ် “ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းဖန်းဖတ် ဖတ် ဖန်း” ဆောင့်ချက်တွေပိုမြန်လာသလို မမညည်းသံတွေပိုထွက်လာပြီး “အာ့ရှီး..ရှီးး..အိုးးးးပြီးပြီ ပြီးပြီအိုးးး” မမတစ်ယောက်လူးလွန့်ကာပြီးသွားတော့ ကျနော်လည်းရပ်လိုက်တယ်။ “မောင်ဆက်မလုပ်ဘူးလား” “မမ မောင်လဲလီးစုပ်ခံချင်သေးတယ်” မမတချက်တွေဝေသွားသေးတယ်။ “မမမခံချင်တော့ဘူးလား” ကျမတွေးမိတယ်လီးစုပ်တာဘာမှမထူးဆန်း ဘူးလေ။မောင်လေးကထပ်လိုးတာကိုလဲလိုချင်သေးတယ်။
ကျမအလိုးမခံမခံရတာကြာပြီမို့ အကြာကြီးကိုအလိုးခံချင်သေးတာမို့ “လာလေ မောင်မမစုပ်ပေးမှာပေါ့” ကျနော် အရမ်းကြိုက်သွားပြီလေ။ဘိန်း အရှိန်လေးကအရမ်းကောင်းတယ်။ဘိန်းစားမိန်းမချစ်တဲ့ ကြာကြာလေးမှိန်းပြီးလိုးနိုင်တယ်လေ။အခုတော့မမကျနော့်လီးကိုအသေအချာစုပ်ပေးနေတယ်။ ကျနော်လည်းကျေနပ်လောက်တဲ့အထိအစုပ်ခံပြီးမှ “မမ ကျနော်လိုးတော့မယ်။ကုန်းပေးပါလား” “အင်းကုန်းပေးမယ်မောင်” မမဖင်ကုန်းပေးတော့ကျတော်နောက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ ခါးလေးခွက်ထားတော့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းတွေကနောက်ကိုပြူးထွက်နေတယ် ။စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ပြီးလီးကိုဖိချလိုက်တယ်။ “ဇွိ ဗျိ ဗျစ် ဖြစ် ဖြစ် ” “အာ့မောင်ဖြေးဖြေး မောင့်မောင့်ဟာကရှည်တယ်” “ဟုတ်ကဲ့မမ” ကျနော်လည်းဖြေးဖြေးချင်းလိုးဆောင့်လိုက်တယ်။
“ဘွတ်ဖွတ် ဘွတ် ဖွတ် ဖတ်ဖတ်” “အာ့အင်းးဟင်းး..” တော်တော်ကြာကြာလေးလိုးဆောင့်လိုက်တော့မမက “ရပြီမောင် မမခံနိုင်ပြီ” ကျနော်အရှိန်လေးတင်ပြီးတဇွပ်ဇွပ်မြည်အောင်လိုးလိုက်ရာ “အာ့ရှီးးရှီးးးမောင်မအရမ်းကောင်းလာပြီ” မမပုခုံးကိုလှမ်းဆွဲပြီးအားရပါးရလိုးလိုက်တော့ မမပြီးချင်နေပြီမှန်းသိလာတယ် ကျနော်လည်းသုတ်မထိန်းတော့ဘဲအာရုံနှစ်လိုးလိုက်တော့တယ် “ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းဖန်းးဖန်းးးး’ “အာ့အိုးးရှီးးရှီး..မပြီးတော့မယ်” “မောင်လဲပြီးတော့မယ် မ” “အင်း အင်းးမောင်” “ဖွတ်ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖန်ူးဖန်းး” “အာ့ရှီးးရှီးးးးပြီးပြီမောင် အား..” ကျနော်လည်းမမခါးကိုထိန်းကိုင်ပြီး အချက်တစ်ရာလောက်ပစ်ဆောင့်လိုက်ရာသုတ်တွေပန်းထွက်သွားတော့တယ်” “ဟားးးကောင်းလိုက်တာ မ ရာအရမ်းချစ်သွားပြီ” “မ လဲမောင့်ကိုချစ်ပါသတဲ့ရှင်” “မောင်မပြန်တော့ဘူး၊ဒီမှာပဲ နေတော့မယ်” “မောင် လက်မထပ်ဘဲအတူနေလို့မဖြစ်ဘူးလေ” “အင်း ဘာဖြစ်လို့လဲမ” “မမကိုလူတွေပြောလိမ့်မယ်” “ဒါဆိုလဲလက်ထပ်လိုက်ကြတာပေါ့မရယ်” အဲဒီနေ့ကစပြီးကျနော်တို့လက်ထပ်လိုက်တယ်။လက်ထပ်ပြီးတော့ မမကိုကျနော်လိုးချင်သလိုလိုးလို့ရသလိုကျနော်လည်းငွေပုံပေါ်စံရတဲ့ငွေကျေးလေးဖြစ်ပြီလေ။သိတယ်မလား ငွေပင်နားတော့ငွေကျေးတဲ့။
ကျော်ကျော်အရမ်းပျော်ခဲ့ရပြီ။အခုဆို ရင်မမဟာ ကျနော်ရဲ့လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်ပြီ မမအနားမှာချစ်စကားလေးတွေပြောပြီးမမ ကိုအမျိုးမျိုးလိုးနိုင်ပြီလေ။မမကိုလီးရည်ပါ သောက်ခိုင်းနိုင်တယ်။ဖင်လိုးမလားမမကအဆင်သင့်ပဲ။ ဆက်စ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ရင်မမရော ကျနော်ပါ မတင်းတိမ်နိုင်ဘူး။ မမကိုအကြိုက် လိုးဆော်ခွင့်ရပေမယ့် လူစိတ်ဆိုတာလည်းအ ဆန်းသားလေ။အသက်ကြီးကြီးလိုးပြီးရင် ငယ်ငယ်လေးကိုပါလိုးချင်သေးတာပဲ။ဒါပေ မယ့်အခုကတော့မမကိုပဲအပီလိုးပြီးမမကိုလိုသလိုကြိုးဆွဲလို့ရအောင်ကြံစည်နေတာပါ ပဲလေ။မမကိုယူလိုက်လို့တဖက်ကအပေါင်းအသင်း တွေကလဲကြွက်ဖျင်းလို့ပြောချင်ကြတယ်။ဒါ တွေကမကြာခင်မှာပဲပပျောက်သွားတာပဲလေ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်ကငွေလျှံနေပြီ အပေါင်းအသင်းတွေကိုကျွေးနိုင်တယ်မွေးနိုင်တယ်။အရင်ကဆယ်ဂဏန်းမကိုင်ဖူးပေမယ့်အခုဆိုရင် ပိုက်ဆံအိတ်မှာ တစ်သောင်းတန်တစ်စည်းအမြဲပါတယ်။
မမရဲ့အဆက်အသွယ်ကြောင့်ပွဲစားလုပ်ရင်းငွေ ပိုလေးရတယ်။မမကကျနော့်အတွက်အမြဲ ပေးတယ်။ဘော်ဒါတွေလား လာထားပဲ။ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ဘာသောက်မလဲ ကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရပြီ။ဘိန်း လားအရင်ကငါး ပြားလောက်ရဖို့အရေးခြစ်ခြုပ်ရတာ။အခုလားခဏခဏဝယ်ရင် လူသိမှာစိုးလို့အများကြီးဝယ်ထားတာ။မမက သိတယ်။အိမ်ကိုယူမလာဖို့ပြောတဲ့အတွက် ကားပေါ်မှာပဲထားတာ။ကားတစ်စီးအပိုင်ပေးထားတာလေ။လွှင့်ချင်သလိုလွှင့်လို့ရတယ်။ ကေတီဗီ လားခဏခဏရောက်ပေါ့။သိတဲ့အတိုင်း ပဲကျနော်ကငလျှံလေ။ကျနော်ပဲရှင်းတာ။ အဲဒီမှာစတွေ့တာပဲ။ကောင်မလေးတစ်ယောက် တွေ့တယ်။
ခွန်းချိုတဲ့။တသက်လုံးအချစ်မရှိခဲ့တဲ့ကျနော်ခွန်းချိုကိုချစ်မိပြီလေ။ခွန်းချိုဆို တာကအသားလေးဖြူဖွေးပြီးအရပ်ငါးပေ သုံးလောက်ရှိကာရင်ထွားပြီးခါးသေးကာတင် သားတွေလုံးကျစ်နေတာပါ။အချောအလှတွေကခွန်းချိုဆီမှာပဲစုပုံထားသလိုဖြစ်နေတာ။ တကယ်ဆိုခွန်းချိုကကြွေရုပ်လေးလိုပါပဲ။ အကြောင်းမလှလို့ကေတီဗီရောက်နေပေမယ့်။ အပြင်မှာတွေ့ရင်သဌေးသမီးရှုံးလောက်တဲ့ရုပ်ရည်လေးပါ။ ခွန်းချိုနှင့်နှစ်ယောက်တည်းအခန်းတခန်းယူပြီးစကားပြောလိုက်တယ်။
“ခွန်းချို ကိုကျနော်ချစ်တယ်” “တွေ့တဲ့လူတိုင်း လျှာမှာအရိုးမရှိတော့ဒီလိုပဲပြောကြတာပဲကိုကျော်” “ကျနော်တကယ်ပြောတာပါ” “ကိုကျော် ခွန်းချိုက ကေတီဗီမှာလုပ်တယ်ဆိုပြီးလက်တဲ့စမ်းချင်တာလားကိုကျော်” “မဟုတ်ရပါဘူး ခွန်းချိုရယ်၊တကယ်ချစ်တာ ပါ” “ဟင်းးဟင်း..ကိုကျော် ကိုကျော်၊ကိုကျော့်မှာမိန်းမကြီးငုတ်တုပ်ရှိနေတာခွန်းချိုမသိဘူးထင်နေလား” “ဟင်းး..သိတယ်လို့ထင်ပြီးသား၊မမကိုချစ်လို့မရဘူးလေ၊ခွန်းချိုကျမှ ကိုကျော်ကတကယ်ချစ်မိတာ” “ကိုကျော်ရယ် ကေတီဗီကမိန်းကလေးတွေကို ပြောနေကျစကားတွေလား ၊တော်ကြာအိမ်ကမိန်းမကြီးလိုက်လာပြီးပြသနာရှာရင်ခွန်းချိုတို့ပဲနစ်နာတယ်လေ” “လုံးဝပြသနာမရှာပါဘူး ခွန်းချို” “အိမ်မပိုင်ပဲဂေါ်လီလုပ်လို့ပြသနာတက်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါ” “ဟင်းး..အိမ်မပိုင်ဘူးဟုတ်လား၊ခွန်းချို အိမ်လိုက်ခဲ့လေ” “ခစ်ခစ် ခစ် ခွန်းချိုယုံရမှာလား” “ယုံလိုက်စမ်းပါ” “အင်းယုံလိုက်မယ်လေ” “အရမ်းချစ်တယ်ခွန်းချိူရယ်” ကျနော် ခွန်းချို ကိုဖက်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်။
ခွန်းချိုလည်းပြန်တုန့်ပြန်နမ်းပါတယ်။ ခွန်းချိုရဲ့ စကပ်ကြားကိုလက်လျိုသွင်းလိုက်ပြီးအဖုတ်ဆီကိုလက်နှင့်ပွတ်လိုက်တယ် “အာ့ ကိုကို ဝိတ်တာတွေလာမယ် ” “ပိုက်ဆံပေးထားပြီးမလာဖို့ပြောထားတယ်” “ဟွန်း ဒါမျိုးဆိုတော်တော်တတ်တယ်” “ချစ်ချင်လို့ပါ ခွန်းချိုရယ်” “ကိုကိုရယ် ဒီမှာမလွတ်လပ်ဘူးလေ” “ဒါဆို ဟိုတယ်လစ်ကြမယ်လေ” “ခွန်းချို ဆက်ရှင် မပြည့်သေးဘူး၊ထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး” “ဟာ ခွန်းချိုကလဲဘာမှကြောက်မနေနှင့်မန်နေဂျာကိုပြောလိုက်ခွန်ချို အချိန် အပြည့်ပေးလိုက်မယ်လေ” “အင်း အာ့ဆိုပြောလိုက်မယ်” ခွန်းချိုထွက်သွားပြီးပြန်ဝင်လာတယ်။ “ရပြီကိုကိုဘေလ်ပါ တစ်ခါတည်းတွက်ခိုင်းထားတယ်” “အင်းအဆင်ပြေတာပေါ့ ရော့ခွန်းချိုရှင်းလိုက်တော့” ငွေရှင်းပြီးခွန်းချိုနဲ့ကေတီဗီကထွက်ကာဟိုတယ်လစ်ခဲ့လိုက်တယ်။ဟိုတယ်ရောက်မှ “ကိုကို ခွန်းချိုကိုတရားဝင်လက်ထပ်မှာလား” “ဘာလို့မေးတာလဲခွန်းချို” “မေးရမှာပေါ့ ချစိတယ်ဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်ပြီးပစ်သွားရင်ခွန်းချိုပဲနစ်နာရမှာလေ” “ဘယ်တော့မှမပစ်ဘူး၊တရားဝင်လက်ထပ်မှာ” “ကိုကို့မယားကြီးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ” “ကွာရှင်းပစ်မှာပေါ့” “တကယ်နှော်ကိုကို” “အင်းပေါ့ခွန်းချို” “ဟိ ဒါမှတို့ကိုကိုကွ” ခွန်းချိုက ခလေးတစ်ယောက်လိုကျနော်လည် ပင်းကိုဖက်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တယ်။
ကျနော်လည်းခွန်းချိုကိုဖက်ရင်းခွန်းချိုစကပ်ကိုအပေါ်လှန်တင်ကာ ခွန်းချိုရဲ့ပင်တီကိုဆွဲချလိုက်ကာတင်သားနှစ်ဖက်ကိုဆွဲညှစ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှလက်ချောင်းတွေနှင့်ခွန်းချိုရဲ့အဖုတ်ကိုနှိုက်လိုက်တော့တယ်။ အရည်လေးစိုသလိုဖြစ်နေတဲ့ခွန်းချိုအဖုတ်ကချွဲကျိကျိလေးဖြစ်နေတော့ခွန်းချိုစိတ်ပါနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ပြီးခွန်းချိုရဲ့အင်္ကျီကိုပါဆွဲချွတ်လိုက်ပြီးဘရာချိတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ရာ ခွန်းချိုရဲ့နို့အုံထွားထွားလေးကပေါ်လာတယ်။နို့အုံကြားကိုနှာခေါင်းနှစ် လိုက်ပြီးပွတ်လိုက်ကာနို့ချိုချိုကိုစို့လိုက်တော့တယ်။
“ပြွတ် ..ပြွတ် ..ပြွတ် ” “အာ့းးရှီးးအိုး ကိုကို” သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။အအိုတစ်ယောက်တောင်ပြိုလဲဆင်းခဲ့တဲ့ အနှိုးအဆွအပြုအစုမှာခွန်းချို လည်းယိုင်လဲခဲ့ပြီလေ။နို့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့ရင်းစောက်စေ့ကလေးကလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ “အာ့ရှီး..ရှီး..အိုး ” ညည်းသံထွက်လာသလိုစောက်ရည်တွေစီး ထွက်လာတယ်။ “အားး. ရှီးးကိုကို အာ့ အင်းဟင်းး..ဟင်းးး” နို့သီးလေးလေးတွေထောင်ထလာသလိုစောက်စေ့ကလေးလဲမာလာတယ်။ခွန်းချိုရဲ့ ညည်းသံတွေအတော်လေးဆူညံလာတယ်။ ခွန်းချိုရဲ့ကာမတံခါးကိုပွင့်စေဖို့အတွက် ခွန်းချိုစောက်ဖုတ်ကိုမျက်နှာအပ်ပြီးမာနေတဲ့စောက်စေ့ချွန်ချွန်လေးကို စတင်ပြီးစုပ်လိုက်တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အိုး အမေ့ အိုးး..အားး…” ခွန်းချိုစုပ်သပ်သံညည်းတွားသံတွေလွှင့်ထွက်လာလာသလိုလက်ကအိပ်ရာခင်းတွေကိုဆွဲ ကိုင်ပြီးခါးအောက်ပိုင်းကြွတက်လာတယ်။
အကွဲကြောင်းလေးထဲလျှာထိုးသွင်းမွှေလိုက် တယ်။ “ပလပ် ပလပ် ပလပ်” “အိုးး..ရှီး…အားး…ရှီး..ကိုကိုအားးခွန်းချိုမနေနိုင်တော့ဘူး” စောက်ရည်တွေရွှဲရွှဲစိုပြီးကျနော့ပါးစပ်ထဲမှာ ပေပွနေတယ်။ကာမနှင့်ပတ်သက်ရင်တဏှာ ကြီးတဲ့ကျနော်လျှာကိုအပြားလိုက်လုပ်ပြီး ခွန်းချိုရဲ့ပေါင်ကိုမတင်ပြီးစအိုစူစူလေးက နေအပေါ်ထိဆွဲတင်ယက်လိုက်တယ်။ “အားး…ကို ကို အားး..တော် ပီအားး” ခွန်းချိုကျနော့်ရဲ့အနှိုးအဆွမှာတင်တချီပြီး သွားခဲ့ပြီ။ “ခွန်းချို ကောင်းလား” “ဟင့်…ကိုကိုနှော် ” “ကိုကို့ကိုလည်းလုပ်ပေးပါကွာ” “ကိုကို လုပ်ပေးလို့သာခွန်းချိုလုပ်ရမှာ၊ခွန်းချိုမလုပ်တတ်ဘူး” “ကိုကိုသင်ပေးမယ်လေ” “ဟုတ်ကဲ့ကိုကို” ခွန်းချိုကိုအိပ်ရာပေါ်ကဆွဲထူပြီးကျနော်ကမတ်တပ်ရပ်ကာခွန်းချိုပါးစပ်နားတေ့ပေးလိုက် တယ်၊ခွန်းချိုလည်းနှုတ်ခမ်းလွှာလေးဟကာငုံ စုပ်ပေးတော့တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “ခွန်း ဒစ်ကိုလျှာနှင့်ယက်ပေး” ခွန်းချိုလည်း ကိုကိုကျေနပ်အောင်ဒစ်ဖျားကိုလျှာဖျားနှင့် ရစ်ပတ်ပေးပြီးလီးထိပ်ဝကိုလျှာဖျားနှင့်ထိုးပေးလိုက်တယ် “အိုး..ရှီးး..ရှီးးးကောင်းလိုက်တာ” ကျနော်လည်းအော်ညည်းမိတယ်။ချစ်မိသူရဲ့အကြင်နာပေးမှု့ကိုခံယူလိုက်ရသဖြင့်ကျေနပ်မိတယ် ။ကြာကြာလီးစုပ်မခိုင်းချင်တော့ဘူး လိုးချင်လာတာကြောင့်. “ခွန်း အိပ်တော့ကိုကိုလုပ်တော့မယ်” “အင်းဖြေးဖြေးလုပ်နှော်ကိုကို ခွန်းကြောက်တယ်” ခရာတာတာပြောတတ်တဲ့ခွန်းကိုအရမ်းချစ် မိပြန်တယ်။
ခွန်းချိုပက်လက်ကလေးအိပ်ပေးလိုက်တော့ကိုကိုက ခွန်းချိုပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီးသူ့လီးကြီးကိုတေ့ကာဖိချလိုက်တယ် “ဗျစ် ဗျစ် ဗြိ ဖောက် ဗျစ်” “အာ့ အင်းးဟင်းးးးဟင်းးး” လီးကြီးက ခွန်းချိုအဖုတ်ထဲထိုးခွဲဝင်လာပြီး တင်းကြပ်ကာဝင်သွားတော့တယ်။ခွန်းချိုလည်းနာသွားတာကြောင့်ကိုကို့ရင်ဘတ်ကိုတွန်းလိုက်မိပြီး “အာ့ နာတယ် ကိုကို”. “အစမို့ပါ ခွန်းရယ်”. ကျနော်လည်းခွန်းချိုကိုပြောလိုက်ပြီးခွန်းချိုရဲ့နို့ကိုစို့လိုက်တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” “အာ့ အင်းးဟင်း..အင်းး..” ခွန်းချို ညည်းသံတွေထွက်လာမှလီးသွင်းတာ ကိုဆက်လှုပ်ရှားလိုက်တယ်. “ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ်” “အာ!အင့်! အင့်းးဟင့် ဟင့်အင်းးး” ခွန်းချိုစောက်ဖုတ်လှုပ်ရှားလာမှု့ကြောင့်ခွန်းချိုအရသာတွေ့နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အတွက် “ခွန်းးးကိုကိုနည်းနည်းကြမ်းချင်ပြီ” “အင်း ကြမ်း လေ ကိုကို”. “ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းဖန်းး”. “အာ့ရှီးး.. ရှီးးးအာ့ အင့်ဟင့်အင့် ” လိုးချိန် ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲလုပ်ရသေးတယ် ခွန်းချိုပြီးသွားပြီ ကျနော်လည်း ခွန်းချိုပေါင်ကိုအပေါ်မတင်ပြီးအားနှင့်ပစ်ဆောင့်လိုက်တော့ကျနော်လည်းပြီးသွားကာ သုတ်တွေပန်းထွက်သွားတော့တယ်။
သုတ်ထွက်သွားလို့ပျော့သွားတဲ့လီးကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တော့. “အား..ကိုကို အရမ်းနာနေပြီ” “အစမို့ပါ ခွန်းရယ်နောက်ဆိုမနာတော့ဘူး” “ဟင်းနှော် ကိုကို ခွန်းကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ပစ်မသွားရဘူး”. “ဘ်းတော့မှမပစ်ပါဘူးခွန်းရယ်” ခွန်းချိုကိုနမ်းလိုက်ပြီး ဖက်ထားလိုက်တယ် “နောက် တကြိမ်လောက်လုပ်ချင်သေးတယ် ခွန်းရယ်” “အရမ်းနာနေလို့ပါကိုကိုနောက်မှလုပ်တော့နှော်” “အင်းပါ ခွန်းရယ်” ခွန်းချိုကိုဖက်ရင်း ကျော်ကျော်အရမ်းပျော်ရပြီ။ကံဇာတာ တွေအကျတော်တို့နှစ်ယောက်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။
ညနေစောင်းမှနိုးလာပြီးခွန်းချိုကိုလိုက်ပို့ကာအိမ်ပြန်လိုက်တော့တယ်ရမ်းကောင်းနေပြီ။ မမကငွေပေး၊ခွန်းကအချစ်တွေပေးပေါ့လေ။ ကံဇာတာကောင်းနေပြီဆိုတော့မမကိုလည်းလှည့်လို့ရပြီထင်နေ တာ။တနေ့တနေ့ခွန်းဆီကိုနေ့ခင်းပိုင်းသွားညမှာမမနှင့်နေတယ်။ဒါပေမယ့်ခွန်းဆီပဲစိတ်က ရောက်နေတော့မမနဲ့ဆိုမလန်းဘူး။မူးယစ်ဆေးဝါး (ဘိန်း) လေး အစွမ်းနဲ့ပဲလိုးနေရတာ။တဖြေးဖြေးနှင့်ခွန်း ဘက်ကလည်းအဆင့်တွေတိုးပြီးအိမ်ကိုလိုက်လာချင်တယ်တဲ့။ မမကလည်းကျနော့်လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်နေပြီဆိုတော့လည်းခွန်းကိုခေါ် လာခဲ့တယ်။ “မမ ဒါ ကျနော့်သူငယ်ချင်းလေ၊ခွန်းချိုတဲ့” ခွန်းချို ကျနော့်ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ် ကျနော်သိတယ်။ကျနော့်ရဲ့ချစ်သူပါလို့မိတ်ဆက်မပေးလို့လေ။
“အော် အေး ညီမလေး” “ညီမလေးနှင့်သိတာကြာပြီလား” “ကြာပြီအန်တီ” သိသိကြီးနှင့်ခွန်းချိုဒေါ်ပိုးပန်းချီကိုရွဲ့ပြီးအန်တီလို့ပြောလိုက်တယ် လူကဲခတ်မညံ့တဲ့ဒေါ်ပိုးပန်းချီကောင်းစွာသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ဒီကောင်မလေးအချိုး ကပမာမခန့်ဆိုပြီးတော့ပါ။ “ကဲ အအေးသောက်ပါအုံး ” “မောင်ခဏ လိုက်ခဲ့ဦး” “မမကလည်းဧည့်သည်ရှိနေတာကို” “အင်းပါ မောင်” အအေးသောက်ပြီးကျနော်ခွန်းကိုခေါ်ပြီးလိုက်ပို့လိုက်တယ်။
“ကိုကို ဒီကောင်မကြီးကကိုကို့အပေါ်နိုင်နေသလိုပဲ” “ခွန်းကလဲမနိုင်ပါဘူး” “ခွန်းကိုပစ်ထားလို့မရဘူးနှော်ကိုကို” “ဘာလို့ပစ်ထားရမှာလဲခွန်း” “ကိုကိုဒီကောင်မကြီးကိုမပစ်နိုင်ဘူးလား၊ခွန်း ကနှစ်ယောက်မပေါင်းနိုင်ဘူး” “မပေါင်းပါဘူး ခွန်း” “ဒီကောင်မကြီးကအခုထိတဏှာရူးနေတုန်း၊ အသက်မှအားမနာ” “အင်းလေသူတဏှာရူးပြီးကိုကို့ကိုထောင်ဖမ်း ထားတာ” “ဒါဆိုလဲကွာရှင်းလိုက်တော့” “ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ” “ကိုကို တဏှာရူးမကြီးကိုနှိပ်စက်လေ ကြာကြာမခံနိုင်ပါဘူး” “အင်းဟုတ်တယ်ကိုကိုလုပ်လိုက်မယ်” “ညရောက်ရင်အပီလုပ်ပစ်လိုက်” “အင်း ကိုကိုလုပ်မယ်” ကျတော်အိမ်ပြန်လာတော့ “မောင် နေ့လည်ကကောင်မလေးနှင့်မောင်နဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲ” “ဘာမှမပတ်ဘူး၊သူငယ်ချင်းပဲ” “ရှုပ်မယ်လို့မကြိုးစားနှင့်မောင်” “ဘာရှုပ်နေလို့လဲ” “မောင် မကလူကဲခတ်မညံ့ဘူးမောင်” “သိတယ်” “မောင်အပြင်မှာမရှုပ်နဲ့ မောင့်အတွက်မကအကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်” “အင်း အဲဒါဆိုရင်အခုမောင်လုပ်မယ်၊”
“မောင် မကိုတမင်ရွဲ့နေတာလား” “မရွဲ့ဘူး” “မောင် မကိုတခွန်းမကျန်ပြန်ပြောနေပါလား၊ ဒီကောင်မကမောင့်ကိုဘာဆေးတွေကျွေးထားလို့တစ်ခွန်းမကျန်ပြန်ပြောနေတာလဲ” “မ သူများကိုထည့်မပြောနဲ့၊မက မောင့်အတွက်အကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆို” “ဒါပေမယ့်မောင့်ကိုတော့ကွာမပေးနိုင်ဘူး” “ကွာဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး” “အခု မောင်မကိုလိုးချင်နေပြီ၊အခုခံပေးတော့” “မောင်လုပ်ချင်ရင်ကြိုက်သလိုခိုင်းတော့” “လာ အခုလီးစုပ်ပေး” “စုပ်ပေးမယ်” ကျနော် မရဲ့ရှေ့မှာ ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်တယ်။
မကကျနော့်လီးကိုစုပ်တယ်။ “ဖင်ပါယက်ပေး” .”မောင်” “မပဲပြောတယ်လေအကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆို” “အင်းပါမောင်သာမနက်ဖြန်အပြင်မထွက်နဲ့” မကပြောပြီးကျနော့်စအိုကိုယက်ပေးနေတယ် တမင်ပဲခိုင်းထားတာပါ။ဖင်ယက်ပေးပြီးတော့ “လာမ မဖင်ကိုလိုးမယ်ကုန်းပေး” မကကျနော့်အမိန့်ဘယ်လွန်ဆန်နိုင်မှာလဲ။မဖင်ပေါက်ဝကိုတေ့ပြီးလီးကိုဖိချလိုက်တယ် “တံတွေးမကူ၊ဂျေမကူပဲအနုနည်းနှင့်စပြီးနှိပ်စက်တော့တာပါ” “ဗျစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ်” “အာ့ အိုးးးး နာလိုကျတာ” ကျနော်မရဲ့ဖင်ကြီးကိုတဖျန်းဖျန်းရိုက်လိုက်တယ်။ တင်ပါးမှာကျနော့်လက်ချောင်းရာတွေရဲတွတ်ပြီးအရှိူးတွေပေါ်လာတယ်။ ဒေါ်ပိုးပန်းချီကမောင်နှိပ်စက်နေပြီလို့သဘောပေါက်တယ်။ဒါပေမယ့်မောင့်ကိုမဆုံးရှုံးဖို့က အရေးကြီးတယ်လေ၊ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလိုးနေတဖင်ဝတွေကြိမ်းစပ်နေတာ၊ ကျမေလေလက်ဖဝါးကိုတံတွေးထွေးချပြီးဖင်ဝကိုလှမ်းသုတ်လိုက်တယ် ၊မောင်ကကျမဆံပင်ကိုဆွဲပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကိုလိုးနေတာ ကျမမှာခါးခွက်ထားပြီးခေါင်းကိုမော့ထားရတယ်။
“ဘွတ် ဖတ် ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးးဖန်းးး” “အိုးအာ့ အငိးးဟင်းးဟင်းသေပါပြီ၊မောင်နည်းနည်းလျှော့အုံး” အရမ်းကြမ်းလွန်းတာကြောင့်ကျမမျှာအ်ာဟစ်ပြောပေမယ့်မောင်ကျတော့လုံးဝမလျှော့ “ဗျစ် ဗျ ဗြိ ဖန်းးဖန်းးဖန်းး” “အာ့! အင့် အိုး မောင် မဖင်တွေကွဲပါပြီအား” ဆံပင်လဲဆွဲဆောင့်ပြီးတအားလိုးသလိုတင်ပါးကိုလဲ တဖျန်းဖျန်းရိုက်တာကြောင့်မျက်ရည်တွေပါစီးဆင်းလာတော့တယ်။ နာရီဝက်လောက်လိုးလိုက်တဲ့အခါကျမမခံနိုင်တော့ဘူး ၊ရှေ့ဟတ်ထိုးလဲသလိုဖြစ်လာတယ်။ ဆံပင်ဆွဲဆောင့်ထားလို့သာကျမမှာမလဲနိုင်တာပါ။ လိုးချင်သလောက်သာလိုးပေတော့လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ကာ ဖင်ဝကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖွင့်ပေးထားလိုက်ရတယ်လေ။ ကျနော်လည်းတင်းပြီးဖင်းချည်းလှိမ့်လိုးလိုက်တယ်။ ထိန်းမထားနိုင်တဲ့ဖင်ကအသံထွက်ပြီးအီးစပါထွက်လာတော့တယ်။
ကျနော်လဲတမင်လိုးတာမို့ချီးထွက်လာအောင်လိုးလိုက်တယ် ကျနော်လည်းပြီးချင်လာတဲ့အခါ လိုးတာရပ် လိုက်ပြီး “မ..ဒီဖက်ကိုလှည့်” မ မျက်နှာမှာမျက်ရည်စတွေနှင့်လှည့်လာတယ်။”ပါးစပ်ဟပေး” လီးမှာချီးစတွေပေနေတာကိုသိပေမယ့်ကျမ မှာမောင့်အပြောကိုနာခံရတော့တယ် မမှာကျနော့အပြောကိုသိတော့ပါးစပ်ဟပေး တယ်။ကျနော်လဲအီးတွေပေနေတဲ့လီးကိုသူ့ ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးသူ့ခေါင်းကိုကိုင်ကာပါးစပ်ကိုလိုးလိုက်တယ်။ ခါတိုင်းလိုးသလိုညင်သာတဲ့အလိုးမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ သူကကျနော့်ပေါင်ကိုတွန်းထားတယ်။
ကျနော်လည်းလီးကိုဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင် လိုးလိုက်တယ်။ “ဝု ဝူး အူး ” ပါးစပ်ထဲလီးဝင်နေတော့အသံကမထွက် နိုင်တော့ဘူးလေ။လီးကိုလည်ချောင်းအထိဝင်အောင်ထိုးထည့်လိုက်တယ် ကျမမှာအသက်ရှူမှားလောက်တယ်။အမှားမခံနိုင်ဘူးပါးစပ်ကိုကျယ်ကျယ်ဟပေးလိုက်ရတယ်။ လည်ချောင်းထိဝင်လာတဲ့လီးကိုအ ဆင်ပြေပြေဝင်လာအောင်လို့သာအာရုံစိုက်ရတော့တယ်။ တချက်တချက်ပါးစောင်ကိုချော် ထိုးသေးတယ်။တော်တော်လေးလိုးလိုက်ပြီးမှ ကျမလည်ချောင်းထဲသုတ်တွေပန်းထွက်သွားရတော့တယ်။ “မြိုချ လေ ဘာလုပ်နေတာလဲ” ကျမမှာအီးနံ့တွေလှိုင်နေတဲ့သူ့သုတ်တွေကိုမြိုချလိုက်ရတယ်။
“လီးမှာကျန်နေတာတွေကိုပါယက်ပြီးမြိုချ” “အင်းပါမောင်ရယ်” ကျနော်လည်းကျေနပ်လောက်အောင်လိုးပြီး နှိပ်စက်ပစ်လိုက်တယ်။သူမကျေနပ်လို့ကွာမယ်ဆိုရင်အေးဆေးလေ။ ပစ္စည်းတစ်ယောက်တဝက်ခွဲပြီးအေးဆေးလမ်းခွဲရုံပဲမလား နောက်နေ့ခွန်းဆီကိုသွားမယ်လုပ်တော့ “မောင်ဘယ်သွားမလို့လဲ” “ကျုပ်ဘာသာကျုပ်ဘယ်သွားသွား ခင်များအလုပ်လား” “မောင်ရယ်မ အနားနေပေးပါ” “ခင်များကျုပ်ကိုဘာမှမချုပ်ချယ်နဲ့” “မောင် လုံးဝမသွားရဘူး၊ဟိုကောင်မဆီသွားမလို့မဟုတ်လား” “ခင်များကြီးကိုပြောပြီးပဲ၊လာမချုပ်ချယ်နဲ့လို့””မောင်မသွားရဘူးဆိုမသွားနဲ့” ကျနော့်ကိုအတင်းဖက်ပြီးပြောတယ်။
“မသွားလို့မဖြစ်ဘူး” “မောင်ရယ် မရှိခိုးပြီးတောင်းပန်ပါတယ်” ကျနော့်အနားဒူးထောက်ပြီးရှိခိုးကာကျနော့် ခြေသလုံးကိုဖက်ပြီးငိုယိုနေတယ်။အဲဒီအချိန်ပဲဖုန်းကဝင်လာတယ်။ဖုန်းကိုကြည့်တောခွန်းဆီကဖုန်းပါ “ဟလို ကိုကို” “ပြောလေခွန်း” “ဘာလို့ခွန်းဆီမလာတာလဲ” “မမလေ ထွက်မရအောင်လုပ်နေတာ” “အာဒီတဏှာရူးမကြီးတော့၊လာပြီးစိတ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေတာ” “ဟုတ်တယ်ခွန်းရေ” “စောက်ကောင်မကြီးကိုပါးရိုက်ပစ်” ကျနော်ဖုန်းစပီကာဖွင့်လိုက်ပြီး “ဘာပြောတယ်ခွန်း ကိုကိုမကြားလိုက်လို့” “စောက်ကောင်မကြီးကိုပါးရိုက်လိုက်လို့၊တဏှာရူးနေတာပျောက်သွားအောင်” “ကြားလား ပါးရိုက်ရမလား” “မောင် မမှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲမောင်” “ကိုကိုခွန်းပြောတာကြားလား၊လည်မြိုနင်း ပစ်လိုက်။ကိုကိုမလာရင်ခွန်းအကြောင်းသိမယ်” “ကျုပ်မလုပ်ချင်ဘူး၊ကျုပ်ခြေထောက်လွှတ်” “ကိုကို့ခြေထောက်ဆွဲထားတာလား၊ဆောင့်ကန်ထုတ်လိုက်လေ” “လွှတ်တော့လို့ပြောနေတယ်၊ခင်များကျုပ်ကို ကွာရှင်းလိုက်တော့” “မောင်” “ခေါ်မနေနဲ့တော့၊ ခင်များမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတဝက်ခွဲပေးပြီးရင်ခင်များလမ်းခင်များလျောက်” “မောင်ရယ်ရက်စက်လှချည်လားမောင်” “ဘာမှလာပြောမနေနဲ့တော့သွားမယ်” ကျမဘက်မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့မောင်၊ကျမအ သည်းကွဲကြေအောင်ခံစားလိုက်ရတယ်။
သူက ကျမရှေ့ကကျော့ကျော့မော့မော့လဲထွက်သွားတယ်။ယောက်ျားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမက်တယ်။ တကယ်ဆိုကျမအိမ်မှာသူ့လုပ်အားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။သူကတဝက် တောင်းသေးတယ်။သေသွားတဲ့ယောက်ျား မျက်နှာပြေးမြင်မိတယ်။ကျမစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်။ “ဒီကောင်ကိုရှင်းထုတ်ပစ်ရမယ်လို့” ဒီကောင်ကျမကိုအထင်သေးတယ်။ကျမလည်းအသိများတဲ့လူပဲလေ။ဒီတော့ “ဟလို ” “ဦးရဲထွန်း ကျမပိုးပန်းချီပါ” “ဟုတ်ကဲ့အမ ပြောပါ။ကျနော်ဘာကူညီရမလဲ” “ကားနံပါတ် /………ကိုဖမ်းပေးပါ။” “အမ အဲဒါအမကားမဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်ကိုရဲထွန်း” “ဘာဖြစ်လို့လဲအမ” “ကျော်ကျော်မူယစ်ဆေးဝါးရောင်းနေတာ” “ဟာ ဒီလူတော့ကွာ” “အမအိမ်မှာရောအဲဒီပစ္စည်းတွေရှိနေအုံးမယ်” “အမရှာထားပြီးအိမ်သာထဲပစ်ချလိုက်ပြီ” “ဟုတ်ပြီအမ ကျနော်ကြည့်လုပ်လိုက်မယ်” “အိုကေ ကိုရဲထွန်းကျမဖုံးချလိုက်တော့မယ်” “ဟုတ်ကဲ့အမ သူ့ကားဘယ်အနားရှိတာကျနော်သိတယ်။ အမအိမ်ကကားမို့သတိထားမိတာ” “ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲထွန်း” ကျော်ကျော်အိမ်ကထွက်လာပြီးခွန်းကိုခေါ်ကာဟိုတယ်လစ်လိုက်တယ်။
မနေ့ညကမကိုလိုးထားလို့မလိုးနိုင်မှာစိုးတာကြောင့် (ဆေး) ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာခွန်းကိုလိုးပြီးထွက်လာလိုက်တယ်။လမ်းမှာရဲကတား တော့ “ဘာကိစ်စလဲ” “ရှာဖွေခွင့်ပေးပါ” ကျနော်ခေါင်းနပန်းကြီးသွားတယ် (ဘိန်း)တွေကားပေါ်မှာစိတ်အေးအေးထားပြီး “ဘာရှာမလဲ၊ရော့ဗျာ ဒီမှာ ခင်များတို့အတွက် ပိုက်ဆံ” ငါးထောင်တန်တစ်အုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့တာဝန်အရပါ၊သတင်းပေးရှိလို့ပါ” ကျော်ကျော်ကားပေါ်ကဆင်းရတယ်။ “ကိုကိုဘာဖြစ်တာလဲ” ကျနော်ပြန်မပြောနိုင်တော့ပါ “ဗိုလ်ကြီးဒီမှာ (ဘိန်း)တွေပါ” “ကျော်ကျော်မင်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီ၊ကျန်တာတရားရုံးရောက်မှရှင်းပါ” ရဲစခန်းရောက်တော့ဆေးစစ်တယ်။ဆေးကျ ပါပြီ။ ဆးးတွေအများကြီးနှင့်မိတယ်ဆိုပြီးရောင်းဝယ်သုံးစွဲနှင့်တရားစွဲခံလိုက်ရ ပါပြီ။အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ဆယ်။ ကျနော်ရယ်ပစ်လိုက်တယ်။ “ဟားးးဟားးးး” “သွားပြီ ငါ့ဘဝငွေပုံပေါ်စံခဲ့ရပေမယ့်မထိုက်တော့လည်းထိုက်တဲ့နေရာရောက်ရပြီပေါ့လေ” ပြီးပါပြီ